Nagu saabsan - Ningbo Ameida Technology Co., Ltd.
Ningbo Ameida Technology Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2016 by koox ka mid ah ragga dhallinyarada ah hami. Ka dib sanado badan oo raasamaal ah oo ku jira warshadaha mashiinka goynta, waxaan ku kalsoonahay inaan wax ku biirinno warshadaha casriga ah ee Shiinaha, waxaanan rajaynaynaa inaan u horseedno suuqa caalamiga ah dadaalkeenna.Ameida waa Shirkad-farsameedka Sare ee Qaranka oo ku taal Ningbo ee Shiinaha, oo diiradda saareysa horumarinta, wax soo saarka, iibinta iyo adeegga kadib ee qalabka tooska ah ee CAD/CAM.
Ameida waxay ka kooban tahay koox injineero xirfadlayaal ah iyo maareeyayaal, kuwaas oo guulo la taaban karo ka gaaray dhinacyada mashiinnada, elektiroonigga, software kombiyuutarka, iyo maamulka. Waxaa ka mid ah, 1 bare sare oo ku -xigeen ah, 1 shahaado dhakhtar, iyo 2 haysta shahaadada masterka, waxayna bilaabeen iskaashi mashruuc jaamacadaha sida Jaamacadda Teknolojiyadda Zhejiang.
Maxaan Sameyn Karnaa?
Ameida waxay diiradda saartay soo saarista mashiinnada goynta gogosha leh, mashiinnada goynta template-ka, mashiinnada goynta kartoonka, nidaamyada goynta otomaatiga ah ee warshadaha xayeysiiska, mashiinnada jarista filimka sumadda dhijitaalka ah, mashiinnada goynta hal-lakabka ah, iwm. iyo soo saarista agab dabacsan iyo agab isku jira. Kabo, dhar, boorsooyin, kartoonno, maqaar, xayeeysiin, kuraasta baabuurta, kuraasta baabuurta, qalabka la isku daray, elektaroonigga iyo warshado kale. Badeecadaha iyo teknolojiyada waxay heleen shatiyada qaranka iyo xuquuqda daabacaadda software, waxayna heleen shahaadada CE. Raadinta mustaqbalka, Amada waxay ku adkeysan doontaa inay si joogto ah u xoojiso hal -abuurka farsamada, hal -abuurka maareynta iyo hal -abuurka suuqgeynta oo ah udub -dhexaadka nidaamka hal -abuurka, kuna dadaala inay gacan ka geystaan ​​horumarinta berrinka goynta caqliga leh!
Goynta saxnaanta & isku halaynta, qiimaha macquulka ah iyo wax -qabadka sare ayaa ah waxa aan daba joogno, iyo taageerada farsamo ee dusha sare waa mid ka mid ah qaybta ugu muhiimsan shaqadeena, ku dadaal sida ugu fiican inaan u taageerno dhammaan macaamiisheenna si aan u helno khibradda ugu wanaagsan ee shaqsiyeed.
Waxaan sidoo kale ku adkeysaneynaa astaamaha wanaagsan sida hoose:
Sifada koowaad waa in lagu dhiirado in la dhiirrado, lagu dhiirado in la isku dayo, lagu dhiirado in la fikiro oo la sameeyo.
Daacadnimada-Ilaalinta daacadnimadu waa astaamaha ugu muhiimsan ee Jinyun Laser.
Maalgalin boqolaal malyan oo yuan ah sanad walba tababarka shaqaalaha, samee maqaayad shaqaale, oo shaqaalaha siiya saddex cunto maalintii lacag la’aan.
Samee Sida Fiican
Wanda waxay leedahay aragti weyn, waxay u baahan tahay heerar shaqo oo aad u sarreeya, waxayna raacdaa "ka dhigidda shaqada oo dhan wax soo saar wanaagsan."